‘सहकारी पाठ्यक्रम पास हुनेमा ढुक्क छु’ - सहकारीखबर
‘सहकारी पाठ्यक्रम पास हुनेमा ढुक्क छु’
१९ असार २०७१, बिहीबार
Share : 1,774
– डा. बालकृष्ण रंजित
उपनिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
सरकारले सहकारी शिक्षा पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । कक्षा ९, १०, ११ र १२ तथा उच्च शिक्षामा सहकारी पाठ्यक्रम तयार भएको हो । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालल र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा पाठ्यक्रम निमार्ण गरेको हो । पाठ्यक्रम तयार गरी सहकारीका विभिन्न निकायहरु संग राय सुझाव समेत माग गरेको छ । सहकारीका विभिन्न केन्द्रिय संघहरु संग छलफल गरेर आएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर डा. रंजित संग सहकारीखबर डट कमका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी ।
सहकारी शिक्षा पाठ्यक्रम निमार्णमा यहाँको ठूलो योगदान रहेको छ । सहकारी विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्ने योजना कसरी आयो ?
सहकारी अभियान विकास उन्मुखदेशमा अत्यावश्यक रहेको छ । नेपालमा अन्य विभिन्न आन्दोलनहरु भन्दा सहकारी आन्दोलन सफल भएको छ । यस परिपेक्षेमा सहकारीको गरिमा उच्च रहेको छ । नेपालमा सहकारी प्रति आम नागरीकको धारणा सकारात्मक रहेको छ । सहकारीले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । केही वर्ष यता यदा कदा मानिसहरु सहकारी प्रति नकारात्मक धारणा जान थालेको छ । केही सहकारीका संचालहरुले सहकारीको मर्म, उद्देश्यलाई चोट पुर्याउने हिसाबले गतिविधिहरु अगाडी बढाए । जनताले विश्वास गरेर सहकारीलाई आत्मसाथ गरेर बचत संकलन गरेका थिए । केही संस्थाले दुरुपयोग गरेर संचालक पलायन हुने संस्थानै बन्द गरेर भाग्ने किसिमले गर्दा जनतामा सन्त्रास फैलिएको छ । यसलाई निर्मुल गर्न सहकारी उद्देश्य, मर्म यो होइन भनेर शिक्षा फैलाउन तथा सहकारी के हो र यसले के गर्छ भन्ने सन्देश राखेर जनमानसमा जान पर्यो भनेर खोजीरहेको अवस्थामा शिक्षाबाट जानु पर्छ भन्ने सोच आयो । सहकारी शिक्षानै अन्तिम विकल्प हुने देखेर यस तर्फ हामी लागेका हौं । हाम्रो चाहना बालबालिकाहरुको मन मस्तिकमा सहकारीका राम्रो कुराहरु जाहोस् भन्ने हो । यसबाट बालबालीकाहरु सम्वाहक बनेर गाउँ, समुदायमा सहकारीको राम्रो सन्देश प्रभाव गर्न सक्छन् । सोही कारण स्कुलको पाठ्यक्रममा यो विषय हाल्नु पर्छ भने निक्र्याैल र निष्र्कषमा पुगेका हौं । अहिले ९ र १० कक्षामा ऐच्छिक विषयको रुपमा राख्न खोजिएको हो ।
अहिले सहकारीमा जति पनि समस्या आए यसको मतलब शिक्षा, तालिम र सूचनाको अभाव नै हो होइन त ?
सबै संघ संस्थाको जिम्मेवारी भएको हुनाले शिक्षा मन्त्रालयले यसको नियन्त्रण गर्न के गर्न सक्छ त भन्दा यहि कुराको बोध भयो । हामीले पाठ्यक्रममा यसलाई राख्न पाइयो र सकियो भने जन समुदायमा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने सोच भयो । यसले भविष्यमा दुर्त गती लिन्छ भन्ने मनासयले सहकारी विषयका राम्रा, असल र आर्दश कुराहरु बालबालीकाहरुले पछि आफ्नो जीवन उतारोस् भन्ने हिसाबले हामीले जर्मको गरेका हौं ।
पाठ्यक्रमले कहिले सम्म पूर्णता पाउला त ?
यहि महिना यो पाठ्यक्रम पास हुन्छ । २०७१ र २०७२ सालमा हामीले पाठ्यक्रमको आधारमा किताब लेखाउछौं । २०७३ को नयाँ शैक्षिक सत्र देखि ९ र १० कक्षामा ऐच्छिक विषयको रुपमा अध्ययन शुरु गराउछौं ।
पाठ्यक्रम पास हुनेमा तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ ?
ढुक्क छु र हुन्छ नै । असार २५ गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मुल्याङ्कन परिषद्बाट पास हुन्छ । हामीले २० वटा पाठ्यक्रम पास गर्न लैजादै छौं । त्यस मध्ये सहकारी शिक्षा एक हो ।
त्यसो भए पुस्तक लेखन कहिले बाट शुरु हुन्छ त ?
अब आउने आर्थिक वर्षमा पुस्तक लेखन कार्य राख्दछौं । २०७२ मा सबै लेखनकार्य सकिन्छ ।
पुस्तक लेखन कार्य कसरी हुन्छ ?
हाम्रो रोस्टरको प्रणाली रहेको छ । पत्रिकामा आव्हान गर्ने छौं । सहकारी क्षेत्रमा काम गरेको, अनुभव प्राप्त गरेका, शिक्षामा स्नातक गरेका, सहकारी सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान, गरेका तथा यस क्षेत्रमा भिजेका व्यक्तित्वहरु आब्हान गर्नेछौं । आएका व्यक्तिहरु मध्येबाट छनोट गर्ने छौं ।